Cumaan oo uu ka dhaqan galay bandow habeenkii ah | Star FM
Home Caalamka Cumaan oo uu ka dhaqan galay bandow habeenkii ah
Cumaan oo uu ka dhaqan galay bandow habeenkii ah
Dowladda dalka Cumaan ayaa ku dhawaaqday bandow jiraya xilliga habeenka si loo yareeyo isku socodka bulshada loogana hor tago faafitaanka cudurka COVID-19.
Xayiraaddan ayaa sidoo kale saameynaysa howlaha ganacsiga .
Waxaa sidoo kale la mamnuucay isku imaatin kasta oo dadweyne.
Guddiga sare ee dowladda Cumaan ay u xilsaartay la tacaalidda xaaladaha caabuqa corona ayaa sidoo kale mamnuucay dhammaan howlaha bulsho , dhaqanka ama cayaaraha.
Amarradan ayaa shaqeynaya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Dr. Cabdullahi Nasser Al-Harrasi oo ah wasiirka warfaafinta ee Cumaan sidoo kalena xubin ka ah guddiga sare ee wadankaas ee COVID-19 ayaa sheegay in xayiraadda la fududeyn karo ama la sii adkeyn karo iyada oo lagu saleynaya sida ay xaaladdu tahay.
Previous articleDHAGEYSO:Sicir barar dhanka ganacsiga ah oo ka jiro Wajeer
Next articleGuddiga adeegga garsoorka dalka oo maalinkii saddexaad turxaan bixin sameynaya